Orinasa sy mpamatsy calcium Calcium Nitrate | Lemandou
Lemandou calcium nitrate dia zezika malaky rano feno tsara. Izy io dia manana ny mampiavaka ny famenoana kalsioma haingana sy azota. Izy io dia manan-karena amin'ny ion-kalsioma, ary ny fampiharana maharitra dia tsy hanimba ny toetra ara-batana amin'ny tany, fa afaka manatsara ny toetra ara-batana amin'ny tany ihany koa.
Lemandou calcium nitrate dia azo ampiharina amin'ny karazan-tany rehetra, indrindra raha ampiharina amin'ny tany misy asidra tsy misy kalsioma dia ho tsara kokoa ny vokany. Izy io dia manana fananana sy tombony maro izay tsy ananan'ny vokatra zezika hafa. Ny fampiharana ny nitrate calcium calcium dia mahasoa amin'ny fandrindrana ny fandraisana ny otrikaina amin'ny voly, ny fanatsarana ny fanoherana ny voankazo sy ny legioma, hampiroborobo ny fahamatorana ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny voankazo sy legioma.
Kalsioma Oksida (as CaO)%
Rano tsy voavaha%
Hatsarao ny fanoherana ny zava-maniry sy hanatsarana ny tsiron'ny voankazo.
Ny rano tsy voavahan'ny rano, ny otrikaina 100% amin'ny zavamaniry.
Mameno haingana ny calcium ary manamaivana ny soritr'aretin'ny tsy fahampian'ny calcium.
Tsy misy klôro, sodium na singa hafa manimba ny voly.
Mety amin'ny fanomanana vahaolana otrikaina na fanomanana fangaro.
Ny fahaverezan'ny volatilization dia kely, ny vokatra zezika dia haingana, ary azo ampiasaina ho akanjo ambony sy zezika ifotony ..
1. Izy io dia mety amin'ny vanim-potoana tampon'ny fidiran'ny otrikaina, toy ny vanim-potoana mamoa sy ny vanim-potoana fitomboana afovoany sy tara. Izy io dia afaka mamaha ny tany amin'ny alàlan'ny fosforôra avo sy tsy fihinina calcium. Ny fampiharana an'ity vokatra ity dia afaka manatsara ny kalitaon'ny vokatra ary mampitombo ny vokatra.
2. Ampiasaina be amin'ny voninkazo, voankazo, legioma, ahitra ary voly ara-toekarena hafa.
3. Azo ampiharina amin'ny tany maro karazana, indrindra ny tany misy asidra. Izy io dia afaka mampiroborobo ny fanatsarana ny fananana ara-nofo. Zezika mahomby sy sariaka amin'ny tontolo iainana.
4. Ireo loharano ilaina amin'ny kalsioma sy azota ilaina amin'ny teknika fambolena soilless maoderina.
Previous: Calcium Nitrate Granular + B
Manaraka: Calcium Ammonium Nitrate (CAN)